Amakhodi Amaphutha weDisney Plus (2020) - Ukulungiswa Okungenzeka - Ungakwenza Kanjani
Njengakwamanye amazwe, ababhalisile beDisney Plus e-US babhekene nezikhathi ezinzima ngenxa yephutha ngenkathi besakaza futhi beqa iziphazamisi. Kwabanye abantu, iDisney Plus ibithathwa njengeyinhle kepha ababhalisile bayo bangaphambilini basho inkinga enkulu evala uhlelo lokusebenza ukuthi lungafinyeleleki.Abasebenzi beDisney Plus bathola isiphazamisi ngasinye kusuka kudivayisi futhi bayithuthukisa ngokuqhubekayo, futhi, silapha nemihlahlandlela ekhethekile yokubika amaphutha ahlukahlukene kuhlelo lokusebenza.
Uma ufuna i- Isivivinyo sezinsuku ezingu-7 seDisney Plus lapho-ke ngeke kukubize ngisho indibilishi, kodwa uma uthenga noma ikuphi okubhalisile futhi ungatholi amasevisi alindelwe ohlangothini lwabo ungaya khona manjalo uye ekunakekelweni kwamakhasimende akwaDisney ukuze ubuyise imali noma ulungise inkokhelo.
Ngaphambi, ukufunda ngamakhodi wephutha ahlukile weDisney Plus ake sihlanganise ezinye izinkinga zokuxazulula inkinga eziyisisekelo. Lezi zinyathelo zingasetshenziselwa noma iyiphi ikhodi yephutha oyitholayo.Uma ukuthola kunzima ukuxhumana neDisney Plus, bese ulandela lezi zinyathelo ezingezansi.
Imihlahlandlela eminingi ye-Disney Plus:
INetflix vs Disney Plus
Amathiphu wokuxazulula inkinga:
Hlola isivinini sokulanda se-inthanethi kusuka kudivayisi exhunywe.
Qala kabusha ukuxhumana kwakho ngokunqamula i-inthanethi yakho kuqala bese uyixhume kabusha ngemuva kweminithi elingu-1.
Sebenzisa enye idivayisi ukuzama i-Disney Plus
Bhalisela i-Disney Plus bese ungena futhi ngemvume
Ungasusa futhi uhlelo lokusebenza kusuka kudivayisi bese uphinde uyifake ukuze uthole imiphumela emihle.
Ungasihlola Kanjani Isimo SeDisney Plus?
Indlela engcono kakhulu yokwazi isimo sanoma yiluphi uhlelo lokusebenza lokusakaza ukuhamba ngewebhusayithi esemthethweni. Ungaxoxa nengxoxo bukhomachat yengxoxo yokwazi ukuthi ngabe iDisney Plus ihamba kancane kuwe noma kunoma ngubani.
Le yindlela elula futhi esheshayo yokunikeza isheke. Bheka inketho yengxoxo esikrinini bese ubuza umbuzo wakho kuchwepheshe. Ngokuqinisekile bazokusiza enkingeni yakho.
Vakashela - https://downdetector.com/
I-Disney Plus Ayisebenzi Amaphutha:
1. Iphutha le-Disney Plus 83: Izinkinga Zokuhambisana Kwedivayisi
Iphutha 83 libhekwa njengenkinga enkulu yababhalisile. Uma i-Disney Plus yakho ikukhombisa lo mlayezo idivayisi yakho ibhekene nenkinga yokuhambisana. Ngokuyinhloko, idivayisi yakho ofuna ukubuka kuyo okuqukethwe ayisebenzisani neDisney Plus.Lokhu kungakucasula ngoba awukwazi ukubuka okuqukethwe kwe-Disney Plus obukade uzimisele ukubukela kukho. Yize kukhona ezinye izici futhi ezithinta ukuhambisana kwedivayisi.
Into yokuqala ongazama ukuyicisha idivayisi yakho bese uyivula futhi. Into elandelayo ongayenza ukubheka ukuthi ngabe idivayisi yakho iyilungele yini i-Disney + ukuze uthole isiqiniseko.Uma usuvele wenze lezi zinyathelo, ungabuyekeza idivayisi yakho oyisebenzisayo. Lokhu ngeke kwenzeke kumadivayisi amasha. Kepha uma uhlala usebenzisa insiza kudivayisi yakudala okungukuthi i-iOS noma uhlelo lokusebenza lwe-Android, khona-ke ingasenqaba isicelo sakho. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi usebenzisa insiza ohlelweni lokuvuselela lwamanje.
Uma uzimisele ukubuka i-Disney Plus kumadivayisi afana ne-smart TV, i-PlayStation 4, noma i-Xbox 1, uzothola imihlahlandlela yokubuyekeza isoftware kuwebhusayithi.Ngokuqondile, Iphutha 83 lisho ukuthi insizakalo inenkinga ngohlelo olisebenzisayo ukubuka okuqukethwe, ngakho-ke kungcono ukukushintshela kukhompyutha noma ku-smart TV yakho.
Lungisa i-Disney Plus Error Code 83 - Umhlahlandlela oningiliziwe
2. Iphutha le-Disney Plus 42: Izinkinga ezixhuma nensizakalo yakho
Iphutha lama-42 likhombise ukuthi kunenkinga ekuxhumaneni nensizakalo yakho.Noma kungaba iphutha ohlangothini lweDisney noma kungaba inkinga yenethiwekhi yakho.Uma leli phutha livela ngasohlangothini lweDisney Plus lapho-ke kungenzeka ukuthi bagcwalise ukufunwa komsakazi ngamunye ngasikhathi sinye. Lolu hlobo lwenkinga luvame ukwenzeka ngesikhathi sokusetshenziswa okuphezulu kwezinsizakalo.
Le nkinga izophela maduzane. AbakwaDisney nakanjani bazoqinisa izinsizakalo zabo ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende abo abalinde ukubuka ama-Star Wars abo neMarvel abawathandayo kepha lokhu kuzothatha isikhathi.Uma uzimisele ukubona ukusakazwa kwevidiyo ye-4k futhi isivinini sakho se-inthanethi sihamba kancane ngeke ukwazi ukubona okuqukethwe kwakho. Ividiyo engu-4k idinga izinsizakalo ze-intanethi ezisezingeni eliphakeme.
Kukhona ezinye izixazululo zokuxazulula inkinga zokuxhumeka kwe-inthanethi okusheshayo. Ake sibheke ezinye izikhombisi ezijwayelekile zesisombululo: -
Hlola isivinini se-inthanethi
Phuma kule divayisi bese ungena ngemvume futhi
Qala kabusha ukuxhumana kwe-intanethi bese uyishiya imizuzu engu-5 bese uxhuma kabusha
Sula yonke inqolobane yesiphequluli
Hlola izibuyekezo zerutha yakho ye-Wi-Fi.
3. Iphutha le-Disney Plus 73: Inkinga yokutholakala kwendawo
Abaxhasi babika iphutha lama-73 njengezinkinga zendawo. Kuyinkinga ehlobene nokutholakala kokuqukethwe ukuthi okuqukethwe kwehlukile kwamanye amazwe. Njengama-movie angaqalwa kwamanye amazwe kepha hhayi kwamanye amazwe. Ungahlola ukutholakala kwezihloko ngokusesha kwe-google. Lokhu ekugcineni kuzokhombisa ukuthi okuqukethwe kuyatholakala ezweni lakho noma cha.
Uma ubona leli phutha into yokuqala ongayenza ukuxhuma kabusha ukuxhumana kwakho kwe-inthanethi. Ungakwenza lokhu ngokuqalisa kabusha imodemu futhi lokhu kuzovuselela inethiwekhi yakho khona manjalo noma uma uxhume kwi-inthanethi kusuka kuselula bese ungavula inethiwekhi yakho ngemodi yendiza bese uyicisha.
Uma la maqhinga nawo engeke asebenze ungasesha ngefayela lakho le- isiphequluli esivela kwenye i-VPN uhlelo lokusebenza.
Dlula kulezi zinyathelo ukwazi inkinga yendawo yakho:
Hlola ukuthi leso sihloko siyatholakala yini ezweni lakini ku-Disney Plus
Bheka ithuluzi lakho lekheli le-IP odlulisa kulo amehlo.
Hlola isiphequluli sakho nezinhlelo zokusebenza uma i-VPN isebenza bese usetha kabusha ukusethwa kwendawo.
4. Iphutha le-Disney Plus 24 no-43: Ukungena ngemvume noma inkinga yokuxhuma
Womabili amaphutha angama-24 no-43 ahlobene nomsebenzi wokungena ngemvume nokuxhumeka kwe-inthanethi.Ukuxazulula lezi zinkinga okokuqala hlola insiza yakho ye-inthanethi. Ungabheka futhi kumhlahlandlela wokuxazulula inkinga woxhumano lwe-Wi-Fi ku-athikili engenhla.
Uma ingeke isebenze phuma ngemvume bese ungena ngemvume kuDisney Plus.Ungaya ngesikweletu sakho uma lezi zindlela zingasebenzi. Noma yisiphi salezi zixazululo ngokuqinisekile sizoxazulula inkinga yakho.
5. Iphutha le-Disney Plus 39: Ukusakaza nge-Xbox One
Iphutha liza kubasebenzisi be-Xbox one. Isixazululo sale nkinga singaxazululwa kalula. Kumele uhlole ukuthi ngabe usebenzisa insiza ngasikhathi sinye kunoma iyiphi enye idivayisi. Ngakho-ke, dlula kwiselula yakho, ikhompyutha ephathekayo, noma ithebhulethi.
Uma ususe i-Disney Plus kwamanye amadivayisi bese uvuselela i-Xbox eyodwa yakho futhi izosebenza. Esinye isixazululo esincane esingasibheka ukushintsha imbobo ye-HDMI ku-Tv yakho engaxhuma ku-Xbox yakho kalula.
Ababhalisile beDisney Plus nakanjani bazokujabulela ukubhaliswa kwabo lapho kungasenazo izimbungulu. Akukho zinkokhelo zesivivinyo samahhala sezinsuku ezingu-7. Ungakujabulela lokhu mahhala. Kepha ababhalisile asebevele bakhokhele le nsizakalo kepha abanelisekile bangaxhumana nensizakalo yokunakekelwa kwamakhasimende e-DISNEY.
Amanye amaphutha angaphazamisa ukuzijabulisa kwakho njengephutha 83 elokuhambisana kwedivayisi, iphutha lama-42 lizokwazisa ngokuxhumeka kwakho kwe-inthanethi, iphutha lama-73 lizobonakala uma lokho okuqukethwe okuthile kungatholakali ezweni lakho. Iphutha lama-24 nelama-43 elezinkinga zokungena nokuxhumeka futhi okungenani kube nephutha elingu-39 lapho okuqukethwe kwakho kungeke kuboniswe ku-Xbox one device. Kuzo zonke lezi zinkinga ezinye izixazululo eziyisisekelo yilezi: -
Qala kabusha idivayisi yakho noma uqalise kabusha imodemu
Ukungena ngemvume nokuphuma ngemvume kusuka kudivayisi
Umkhawulo Wokulanda we-Netflix